FSX no nidona, rehefa mihazakazaka Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 in malalaka nandositra sy MP Sessions. Misy ny vahaolana?
Ny olana tafatoetra amin'ny dingana mora roa:
Dingana 1: DownloadUIAutomationCore.dll
Dingana 2: Vahao ny ZIP rakitra sy mametraka ny nalaina UIAutomationCore.dll ao amin'ny fototry ny FSX fametrahana fampirimana izay mitoetra fsx.exe ny rakitra. Ho azo antoka FSX tsy mihazakazaka.
Rehefa afaka izany, asa, manomboka FSX dia hahita fa fomba fijery ara in FSX, tsy misy intsony amin'ny farany mahatonga FSX mba hianjera.
Raha tsy misy vahaolana io, FSX hahantonay tahaka dia ho "ara-potoana avy" ao amin'ny fivoriana mpilalao maro. Aza mampiasa dikan hafa ny UIAutomationCore.dll, satria io no hany dikan dikan izay hampitsahatra ny nianjera.